Coral Reef: အလွမ်းရက် ၁,၄၆၁
သက်ဝေ said on March 12, 2011 at 10:36 PM
ဖိုးကြယ် said on March 12, 2011 at 10:58 PM
အစ်မရယ်.....ဘာဆက်ပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး....တရားတော်တွေနဲ့အတူ မွန်းမံထားတဲ့ စိတ်လေးတစ်ခုရယ်.....လောကကြီးရဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှု တစ်ချို့ရယ်.....နောက်...လေးစားဖွယ်ရာ ချစ်ခြင်းမတ္တာတစ်ခုရယ်ပေါ့...... ။
TZA said on March 13, 2011 at 7:44 AM
ဒီလို စိတ်မကောင်းစရာအကြောင်းတွေကို ကာယကံရှင်ကိုမေးကြည့်ချင်ပေမယ့် မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ အတိတ်ကအရိပ်တွေကို ဇွန် မေ့ပစ်နိုင်ပါစေ။
ThuHninSee said on March 13, 2011 at 8:45 AM
အတွေးကမ္ဘာ..မှတ်တမ်း said on March 13, 2011 at 8:47 AM
စာရေးသူ စာဖတ်ကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာပိုဒ်တွေကတဆင့် သိရတာမို့ အင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ်... ၄ နှစ်ကျော်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ အလွမ်းတွေ ..အမြန်ကုန်လို့ .. Happy Ending ဖြစ်ပါစေလို့ ..ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
Mon Petit Avatar said on March 13, 2011 at 9:35 AM
I am so sorry to hear that sorrowful incidence.
အင်ကြင်းသန့် said on March 13, 2011 at 10:29 AM
ဖတ်ပြီး ဂျင်း မျက်ရည်ဝဲမိတယ်...တကယ်။ မမစိတ်ဓါတ်တွေကြံ့ခိုင်နေပြီဆိုတာ ဂျင်း သိတယ်။ :)
ချစ်ကြည်အေး said on March 13, 2011 at 1:22 PM
ညီမဇွန်ရေ...အလွမ်းတွေကို တရားဓမ္မနဲ့ပဲ တဖြည်းဖြည်း တိုက်စားပါးလျ စေလိုက်ပါတော့ ညီမရယ်...။ နှစ်ယောက် အတူ ရှိနေသူတွေလည်း တနေ့မှာတော့ ရှင်ကွဲမဟုတ်တောင် သေကွဲ ကွဲ ကြရမှာပါပဲလေ....အနှေးနဲ့ အမြန်ပါပဲ။ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေတော့ လိုအပ်တာပေါ့လေ.....
မိုးခါး said on March 13, 2011 at 2:21 PM
း( ဖတ်ပြီး ငိုချင်သွားတယ် မရယ် ..း(
Shinlay said on March 13, 2011 at 3:14 PM
အပြုံးပန်း said on March 13, 2011 at 7:53 PM
ဘယ်တော့ ပြန်မှာလဲ၊ ဘယ်ကာလလဲ၊ ကြာမှာလား၊ ရန်ကုန်ကိုပဲလား၊
ပန်ဒိုရာ said on March 13, 2011 at 10:26 PM
ဘယ်လိုပြောရမှန်း မသိအောင်ပါပဲ ဇွန်မိုးစက်ရယ်
အချိန်ဆိုတဲ့ သမားတော်ရဲ့ ဆေးတွေကိုသာ မှီဝဲရမှာပါပဲ။
Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) said on March 14, 2011 at 2:33 AM
ပိုစ့်ဖတ်နေရင်း တဝက်လောက်မှာ သေများသွားတာလား မသိဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတချက် ဝင်လာတယ်။
ပိုစ့်ရဲ့အဆုံးမှာ"" “သေသောသူ ကြာရင်မေ့” ဆိုတဲ့ စကားပုံဟာ ကျွန်မအတွက် မမှန်ပါဘူးကွယ် " ဆိုတော့...,
ရင်ထဲနင့်သွားတာပဲ မဇွန်ရယ်။ !_!
တယောက်သောသူကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုး ကြင်နာခဲ့ရိုး မှန်ရင် သေကွဲပဲ ကွဲကွဲ၊ ရှင်ကွဲပဲ ကွဲကွဲ အချိန်တွေ အရာတွေ ဘယ်လိုပင်ပြောင်းပြောင်း တမ်းတလိုက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ချစ်သောသူဟာ အမြဲ ရှိနေတတ်ကြစမြဲပါပဲ။
တကယ့်ကို နက်နဲမှန်ကန်စွာ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်မိပါတယ် မဇွန်ရေ။
Wunna said on March 14, 2011 at 8:52 AM
Good writing.. :)
TnT said on March 14, 2011 at 1:23 PM
I believe you can be free from such suffering soon. sis. All the best,
Rita said on March 15, 2011 at 9:48 AM
တင်ကာစကတည်း ကိုယ် ဖတ်သွားတယ် ဇွန်
မမင်း said on March 18, 2011 at 9:06 PM
မမင်း said on March 18, 2011 at 9:07 PM
ပိုပြီးသတ္တိတွေရှိလာခဲ့တယ် ဆိုတဲ့စကားကို သာဓုခေါ်သွားပါတယ်။
noblemoe said on March 22, 2011 at 8:05 AM
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on March 24, 2011 at 6:38 AM
ဟုတ်တယ်.. သေသောသူကြာရင်မေ့ဆိုတာ မမေ့တတ်သူတွေတွက် မမှန်ပါဘူးကွယ်..
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on April 4, 2011 at 11:47 AM
Anonymous said on April 11, 2011 at 11:43 AM
It wasagreat sorrow to lose you. Hope you will receive all the merits from your loved one. Sadly, you didn't getachance to see my daughter. R.I.P my friend.
One of Junes
Anonymous said on April 12, 2011 at 8:15 PM
(၃၆၅ x ၄)+ ၁- ၁၄၆၁ ရက်
ရွှေပြည်သူ said on April 13, 2011 at 7:47 PM
မျက်ရည်တွေဝဲနေပြီ အစ်မဇွန်ရယ်... (ငိုမိတော့မယ် ထင်တယ်)
အစ်မပြောသလို တရားက အစ်မကို စောင့်ရှောက်မှာပါ...
ငါ့အစ်မ နှစ်သစ်မှာ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ...
Lynsie said on May 22, 2011 at 3:32 PM
Nan, Whenever I read your shout-outs, I feel really sad. :( SMN was so lucky to have you.
Baby taster said on May 23, 2011 at 3:05 AM
ဟုတ်ပါတယ် သေသောသူကြာရင်မေ့လို့ ပြောကြပေမဲ့
တကယ်တော့ မမေ့နိုင်ပါဘူး။ ဒါလည်းခံစားဖူးသူတွေသာ သိနားလည်ကြတာပါ။ တရားက ဇွန့်ကို စောင့်ရှောက်မှာပါ ;(
အပေါ်က အလှူပို့စ်ဖတ်ပြီး စိတ်ဓါတ်လေးကို
ချီးကျူးမိတယ်။ ၀မ်းသာမျက်ရည်လေးတောင် ကျခဲ့မိတယ။် အခုပို့စ်က ကိုယ့်ကို တော်တော်ဝမ်းနည်း မျက်ရည်ကျစေခဲ့တယ်။ စာရေးလည်းကောင်းတယ်နော်
Anonymous said on August 31, 2011 at 8:13 PM
Anonymous said on April 15, 2013 at 11:22 PM